ezi yayiziiflip zakudala ezazisetyenziswa ngumntu wonke (kwaye siyazikhumbula)
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ezi yayiziiflip zakudala ezazisetyenziswa ngumntu wonke (kwaye siyazikhumbula)
Ezi yayiziiflip zakudala ezazisetyenziswa ngumntu wonke (kwaye siyazikhumbula)
Iifowuni zeFlip: bayeka ukubusa kwabo kwimarike ngexesha ii-smartphones zokuqala eziyinyani zaye zafumaneka kwezorhwebo phakathi kwiminyaka yoo-2000. Kodwa ixesha elide-ngexesha lokugqibela kwe-1990s kunye nee-2000s zokuqala-yayiyeyona hlobo luthandwayo lweefowuni. Babonwa njengabapholileyo, abagxadayo, kunye nesinyathelo esingentla xa kuthelekiswa neefowuni zeeswiti ezamkelwa ngokubanzi ngeli xesha. Yayiloluhlobo olucocekileyo ukuba kufuneka uyivule njani ifowuni ukuze wamkele umnxeba. Isindululo ngokwaso sasiyanelisa ngendlela eyahlukileyo xa kuvalwa ifowuni ukuba ixhome. Ziphume nini iiflip?
Yayiyintoni ifowuni yokuqala?
Eneneni ayibalulekanga ukuba yeyiphi ifowuni eyokuqala ukusebenzisa le fomu; okubalulekileyo kukuba iifowuni zeklamshell ziye zafaka ngempumelelo amagama abo kwimbali yetekhnoloji yeselfowuni.
Kule mihla, abantu abaninzi bacinga ukuba iifowuni zeflip njengezinto zakudala, kodwa abanye bajonga uninzi lwazo njengeefowuni zakudala. Kweli qhekeza, siza kuhla ngomgaqo wokukhumbula ezinye zeefowuni zakudala ezivela izolo - ezo wonke umntu athe waba nazo! Sibheja ukuba ukuba unayo ifowuni ngee-1990s kunye nee-2000s zokuqala, mhlawumbi usebenzisa ifowuni kwezi sizibhale apha ngezantsi. Zeziphi ezinye zeenkumbulo ozithandayo ngazo?
Qaphela nje ukuba olu luhlu lungezantsi alukho kulungelelwaniso oluthile.
I-Motorola RAZR yeyona nto iphambili kwifowuni yayo ngalo lonke ixesha, ichaza ukujonga kunye nesimbo sefom xa yayikhutshwa ngo-2004.
Ngubani ongayikhumbuliyo i-Motorola RAZR yoqobo, eyaqala ukwaziswa ngo-2004 kwaye yavelisa ukubulawa okwahlukileyo kwiminyaka emva kokukhutshwa kwayo? Uyilo lweRAZR ngumsebenzi ongapheliyo wobugcisa osadla ngokucinga. Njengoko igama layo lisitsho, umnxeba wawuphawuleka kwi-svelte, iprofayili efana ne-razor yayiqaqambisa-into engazange ibonwe phambi kuka-2004. Ukongeza kudumo lwayo, yayikwenza umdlalo owawubonwa njenge-keypad ye-electroluminescent. Ngokungafaniyo neephedi zokucofa ezibuyisiweyo zabantu bexesha lakhe, ikhiphedi yeRAZR yeelectroluminescent yayicaba ngokupheleleyo kwaye yavelisa ukukhanya kwehypnotic ebumnyameni.
Nangona yayiqala ngeendleko eziphezulu ekuqaleni, ixabiso leRAZR kunye neapos ekugqibeleni lathotywa unyaka emva kokukhutshwa kwayo-ukuyivumela ukuba ifikelele kuluhlu olubanzi lwabathengi. Ukudibanisa uyilo lwayo olubambekayo kunye neendleko ezisezantsi ezalandelayo, yayiyifowuni apho wonke umntu wayenomdla wokuthenga kunye nokubiza eyakhe. Ngokuchukumisayo ngokwaneleyo, imodeli yoqobo yeRAZR V3 yadibanisa ukuthengisa ngaphezulu kwe-130 yezigidi zeeyunithi, ezenza ukuba ibe yeyona fowuni ithengiswa kakhulu ngelo xesha!
Kwakungekho & apos; it sleek or stylish, kodwa bekusekho abantu abaninzi abagungqisa i-Motorola V300 kunye nokuhluka kwayo ngo-2004.
Ukuba ubungenayo imali oyichithayo ukuthenga i-Motorola RAZR emva ngo-2004, ubunokuhlengahlengisa enye indlela ngelo xesha-i-Motorola V300, okanye uninzi lwayo. Le fowuni yeflip yayingaphantse ifane ne-RAZR, kodwa xa ukwelinye icala lamaxabiso, yayiyifowuni abantu abaninzi abagqibe ekubeni bayithengele ukonga.
Efihliweyo phantse kwezi zinto ziluhlaza zerabha, i-V300 yayisisijongi sefowuni ngelo xesha. Igqume kakhulu isiseko, inika abasebenzisi ikhamera ye-VGA 0.3MP, umboniso wangaphandle ohlaza okwesibhakabhaka kunye nemisindo yeethoni. IMotorola V300 isenokungakhuthazi ukuthengisa okufana neminye iminikelo ye-Motorola, kodwa yayiseyifowuni esetyenziswa ngabantu abaninzi ngenxa yexabiso layo elingabizi kakhulu.
Xa i-LG VX-6000 yayikhutshelwa iVerizon Wireless, yanceda ukukhaba ifowuni yekhamera.
Ukuba ubungumbhalisi weVerizon Wireless emva phaya ekuqaleni ukuya phakathi ku-2000s, xa iifowuni zekhamera zazisesebusaneni, ubunokuyigungqisa i-LG VX-6000. Inxalenye yokuthandwa kwayo kungenxa yokuba yayiyifowuni yekhamera yokuqala ye-LG yeBig Red. Ukuthatha iifoto kunye nekhamera ye-0.3MP (VGA) ngokungathandabuzekiyo yayiyinto entsha kuye nabani na ngelo xesha, kodwa inkwenkwe yayicocekile ukuba inegajethi enokwenza iifowuni kunye neefoto. Kwakukho nesipili sokwenza iifoto zakho!
Ngaphandle kwekhamera, i-LG VX-6000 yayikhunjulwa kwakhona kwi-OEL (i-organic electroluminescent) umboniso wangaphandle owawugungqisa. Kwakungafani nezinye zeLCD zangaphandle ezihlanjwe ezinye iifowuni ezazisetyenziswa ngelo xesha. Kwakucacile kwaye inikezela lolona lwazi lufanelekileyo- njengamandla esignali, isibonisi sebhetri, isazisi sefowuni, nokunye okuninzi. Ngcono ngoku, bekukho okucocekileyo okujongeka njenge-TRON-efana nopopayi ngamachaphaza anemibala. Unokuphikisa ukuba i-VX-6000 yayiyifowuni eyanceda i-LG ukuba ibe ligama elifanelekileyo kwisithuba sefowuni ngo-2004. Kwaye oku kwakuphambi kothotho lwe-ENVY kwiVerizon!
Abathengi be-Sprint babengabokuqala ukufumana ikhamera kwifowuni kunye ne-Sanyo SCP-5300 emva ngo-2002.
Kuyamangalisa ukuba iifowuni zeeflip bezinye zeefowuni zokuqala ukufaka iikhamera ezakhelweyo, zibonelela abasebenzisi ngesixhobo esincedo. Kwabo base-US, iSanyo SCP-5300 yeSprint yaxelwa ukuba ibeyifowuni yokuqala yokuthengisa ukupakisha ikhamera, ekusenokwenzeka ukuba kutheni ibhenela abantu abaninzi. Akusekho mfuneko yokuba baphathe enye igajethi ngeenjongo zokuthatha iifoto, kuba ngoku yayinokukhethwa kunye ne-SCP-5300. Ngokuqinisekileyo, ifowuni ngokwayo yayinobukhulu obufutshane kwiflip yefowuni, kodwa kwikhredithi yayo, abantu khange bakhathazeke kuba inamandla okuthatha iifoto.
Abathengi be-Sprint ngokungathandabuzekiyo babenento exabisekileyo abanayo, ngoko ke abo bamkela kwangoko ngokuqinisekileyo babeyithanda into yokuba iSanyo SCP-5300 yongeze into entsha kumxube engazange ibonwe ngaphambili. Abanye abantu bade bakulungele ukufudukela eSprint ngenxa yale fowuni, eya kubonisa isibheno sokuba ngowokuqala kwibhloko ukubonelela ngento entsha ngokupheleleyo!
I-Samsung SGH-X426 ayinakukhunjulwa ngabantu abaninzi, kodwa yayiyifowuni elula esetyenziswa ngabantu abaninzi ngo-2004.
Ulawulo lwangoku lweSamsung kwimarike aluzange lufezekiswe ngobusuku. Kwabathatha ixesha elide ukufikelela apho bakhoyo ngoku. Kodwa phakathi kwe-2000s, i-Samsung yayiyintlanzi encinci echibini, igutyungelwe kukuthandwa yiMotorola, iNokia kunye neSony Ericsson. Ukuba ubungumthengi we-AT & T ngaphandle kwamacingo okanye uCingular ngo-2004, ngewube sele uqhelana ne-Samsung SGH-X426. Yayingenye yeefowuni zokungena kwinqanaba lokungeniswa kwabo babephethe, beqhayisa kuphela ngezinto ezingenanto.
Emva phaya emva koko usenokungayikhathaleli ngaphezu kokuba ubunokuvuma, ubona ukuba zininzi kakhulu iindlela ezinokukhetha onokukhetha kuzo, kodwa ixabiso eliphantsi lomnxeba kunye nezimbo zesilivere ezipholileyo ziyenze yanomdla kwinqanaba elithile. Kwakungothusi konke ukufumana abanini beefowuni zokuqala besebenzisa ifowuni ngenxa yezo mpawu. Unokwenza ityala lokuba iX426 incede i-Samsung ukuba yamkelwe njengomenzi wefowuni eMelika.
Ukufumana impumelelo yayo phakathi kweengcali zeshishini, iNokia T28 ibonise indlela entle yokulayisha entwasahlobo.
Iifowuni bezingakhange zizame ukubonakala zinesitayile kunye noyilo lwazo kwiminyaka yee-1990. Emva phayaa, babethe tye njengoko beza nobukhulu be-hulky kunye nemibala ye-monotone. Nangona kunjalo, iNokia T28 ukusuka ngo-1999 yaya kwicala elahlukileyo kuyilo lwayo olubumbeneyo. Le fowuni yeflip yayiyeyona fown ilula kwaye incinci ngexesha losuku, kodwa okumangalisayo kukuba, yayingeyiyo ifowuni ukuba wonke umntu abe nayo. Endaweni yokuba ibekwe njengeprimiyamu, ebonakaliswe kwixabiso layo ngaphezulu kwezinye iimodeli ngelo xesha.
Ngaphandle kokusilela kwesibheno esiqhelekileyo njengamanye amalungu akolu luhlu, i-Nokia T28 ibetheke phakathi kwabaqeqeshi beshishini. Yayiyifowuni uninzi lwabo belusebenzisa ngelo xesha ngenxa yezizathu ezininzi. Ayibonakalisanga kuphela indlela entle yokulayisha entwasahlobo yokutsiba ukuvula i-flap ukutyhila iphedi yokudayala, kodwa yayiyeyokuqala ukufaka i-eriyali etshintshayo kunye neyokuqala ukusebenzisa ibhetri ye-lithium polymer.
Ngaphambi kwempumelelo yeRAZR kunye neapos, iMoto Motorola V60 yayiyeyona nto ibalulekileyo kubathengi kwiminyaka yoo-2000.
Ngaphambi nje kokufika kwezikrini zemibala kwiiselfowuni, i-Motorola V60 ukusukela ngo-2002 yathatha umhlaba ngoqhwithela kwaye yabhenela kuluhlu olubanzi lwabathengi. Unokuphikisa ukuba i-V60 inike i-Motorola RAZR elandelayo inkuthazo, ibona ukuba i-V60 idlale indlu yentsimbi ekhokelela ekubeni ivakale kakhulu-ngelixa ikwapakisha isoftware kunye neempawu eziye zayenza ukuba isebenze ngokungafaniyo kwiifowuni ezifanayo. Ukongeza kwi-arsenal yinto yokuba yayiyifowuni yokwenene yehlabathi, inika inkxaso kwiiteknoloji ezintathu zeselula (i-GSM, i-TDMA kunye ne-CDMA).
Nge-V60, iMotorola ibonise ukuba ibeka ugxininiso ngakumbi kuyilo lweefowuni zayo. Kwaye kwifowuni yeflip, ngokuqinisekileyo yayiyinto enqabileyo malunga nawo onke amandla, eyenze ukuba ibe yinto exabisekileyo kubantu abaninzi. Iifowuni zeFlip ngeli xesha zazisiqala ukuba zezona zinto zibalulekileyo, ngenxa yoko kwakwanelisa ngakumbi ukubona iMotorola ihambisa iimpahla kunye nokuseta ibha ephezulu ngeV60.
IMotorola MicroTac yazisa i-flip form-factor emva ngo-1989.
Emva phaya ngo-1989, izinto zazahluke kakhulu kwisithuba. Kwakungekho zintlobo ngeentlobo zeeselfowuni zabathengi abanokukhetha kuzo, kwaye iMotorola MicroTac yema phakathi kwezimbalwa ezazikho. Inxalenye yento ibangelwe yinto yokuba yazisa abathengi kule fom-entsha 'yeflip'. Phambi kokufika kwayo, iiselfowuni yayizizinto ezinobungakanani obunzima- ukuzala igama elithi 'izitena' iifowuni.
I-MicroTac nayo yenza iintloko ekukhululweni kwayo kuba yayiyeyona fowuni incinci kunye neyona ilula ngelo xesha. Zonke ezi mpawu ngokuqinisekileyo ziye zanempembelelo kubantu abanokukwazi ukuthenga iselfowuni kunye nenkonzo abayifunayo. Enkosi ngokuthandwa kwayo, iMotorola ikhuphe iiyantlukwano ezilandelayo zeMicroTac, iqaphela isibheno seflip form-factor.
Enye ifowuni eyaziwayo eyaziwayo evela kwi-Motorola yeza phakathi kwe-1990s kunye nokukhutshwa kweStarTac.
Okokugqibela, sifika kwelakudala lokwenyani kolu luhlu- i-Motorola StarTAC. Ukukhutshwa kwayo ngo-1996, yahambisa kwangoko uyilo lweeselfowuni phambili kunye nesayizi yayo encinci kunye necompact. Hayi, kusenokwenzeka ukuba kwakungekho svelte okanye isitayile esijongeka njengeRAZR, kodwa ngefowuni ekhutshwe phakathi kwiminyaka yee-90s, i-StarTAC yayiyifowuni eya kuba yeyayo ngenkangeleko yayo. Ngapha koko, yayiyeyona nto incinci kwaye ilula ngefowuni ngexesha lokukhutshwa kwayo, ke umtsalane wokuba nento enjalo uyenze yanqweneleka phakathi kwababhalisi beefowuni. Ukongeza ekwenzeni iifowuni, i-StarTAC ikwaphawuleka ngokukwazi ukuthumela imiyalezo ebhaliweyo.
Ngoku, ubuhle malunga ne-StarTAC bukwabonwa kwindlela eyenze ngayo ukuba neselfowuni kufumaneke ngumntu ophakathi. Kwakungasekho iselfowuni ebigcinelwe abazizityebi kunye nabaphumeleleyo, ngenxa yoko uninzi lwekhredithi lanikwa i-StarTAC ngokunceda ukwandisa ubunini beselfowuni kwinqanaba eliphezulu. Kwaye ngenxa yesi sizathu, yayiyenye yeefowuni wonke umntu abonakala ngathi yeyakhe ngelo xesha.
Kukho irekhodi eliyimfihlo lemveli lokurekhoda kwisiphelo seGPS S7 / S7, nantsi iiapos zendlela yokuyisebenzisa
Ezona meko zincinci zeGoogle Pixel 2 XL
Eyonaapps ilungileyo ye-Samsung Galaxy Watch, iGear S3, kunye neMidlalo
I-LG V10 vs Samsung Galaxy s6 Edge +: jonga kuqala
I-AT & T ithatha iphepha elibi kwi-T-Mobile kunye ne-apos; incwadi yokudlala enokuvalwa kwevenkile okuzayo
Ungayicima njani imbali yakho yesikhangeli se-Samsung Galaxy (cacisa isikhangeli somkhangeli)
I-Chrome ye-Android: Ungazigcina njani iwebhusayithi, ividiyo kunye nomsindo ngokhetho olutsha lokujonga ngaphandle kweintanethi
Iapile kunye neapos; s i-iPhone 11 Pro kunye ne-11 Pro Max ziyathengiswa kwizaphulelo ezinkulu ngaphandle kokurhweba ngaphakathi
I-5 yezona midlalo zintle zokuzikhusela zithandwayo kwi-Android nakwi-iOS